Raharaha 26 Janoary : Taiza ny SMM sy ny Sendikan’ny Mpisolovava ? -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha 26 Janoary : Taiza ny SMM sy ny Sendikan’ny Mpisolovava ?
Efa nambara teto kanefa averina eto indray fa raharaha manokana mahakasika mpandraharaha sy ny Bianco ny aferan’i Claudine Razaimamonjy. Manaitra ny saina ihany anefa ny mahita ireo fanambarana maro indrindra ny avy amin’ny SMM (Sendikan’ny Mpitsara) sy ny Sendikan’ny Mpisolovava momba ity raharaha Claudine ity satria misy heloka be vava maro nitranga teto amin’ny firenena kanefa hatramin’ny androany dia mbola tsy niloa-bava nangataka ny fampiharana ny lalàna na koa nanokatra fanadihadiana ireto rafitra roa maha Fitsarana ny Fitsarana ireto, dia ny Mpitsara sy ny Mpisolovava izany.
Mbola tsy nisy aina nafoy aloha hatramin’izao ora anoratana izao ny raharaha Claudine, misy anefa ny raharaha goavana namoizana ain’olona mihoatra ny 500, nandrobana sy nandorana tanàna iray manontolo ny taona 2009 raha tsy hiresaka afa-tsy ny 26 Janoary 2009. Raha ny fahafantarana azy hatramin’izay dia manokatra fanadihadiana avy hatrany ny Fitsarana, tsy miandry mpitory raha vao misy aina nafoy. Koa nahoana no mangina eo anatrehan’izany heloka be vava izany ny SMM sy ny Sendikan’ny Mpisolovava, inona eo anatrehan’ny raharaha 26 Janoary ny resaka Claudine?
Iantefan’izao fanamarihana izao ihany koa ireo mitonona ho Fiarahamonim-pirenena milaza fa manara-maso ny fiainam-pirenena. Tsy niloa-bava momba io raharaha 26 Janoary io mihitsy ny Fiarahamonim-pirenena, ny SMM, ny Sendikan’ny Mpisolovava nandritra ny dimy taona nisian’ny Tetezamita. Azo heverina ho firaisana tsikombakomba sa kolikoly tamin’ny mpitondra HAT ve izany? Efa mba nangataka ny hitsarana ireo tompon’andraikitra ambony rehetra voakasik’iny fandrobana sy fandorana tanàna namoizana aina an-jatony iny ve izy ireo? Heloka be vava no nitranga ny alatsinainy 26 Janoary 2009, tsy mila fanadihadiana ny fahamarinany na tsia satria dia niaraha-nahita ireo razana niampatrampatra tamin’izany raha tsy hiteny afa-tsy izay niseho tao amin’ny Trading Center Analakely, nandorana velona olona am-polony maro.
Sa miraraka ny vola be avy any ambadika any ka mampiaka-peo avokoa ireo efa tsy sahy nandray ny andraikiny hatramin’izay? Marina tokoa ny voalaza tao amin’ilay fanambarana nataon’izy ireo nanao hoe: “ny andininy faha-6 anatin’ny lalàm-panorenana dia milaza fa ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka. Mitovy ny olona rehetra eo anatrehan’ny lalàna, na izy natao hiarovana, na izy natao handidy, na izy natao hamaizana. Tsy misy olona afaka mihoatra ireny lalàna ireny, eny fa na dia ireo eo amin’ny fitondrana fara-tampony aza”. Koa inona no antony tsy nanokafan’ny SMM fanadihadiana manodidina ny raharaha 26 Janoary 2009 izay namoizana aina olom-pirenena maherin’ny 500?
Voahosotra ho tompondaka tamin’ny fifaninanana iraisam-pirenena, « Basikety Somaroho 2018 » taranja basikety, sokajy N1A lehilahy, ny ASCB Boeny. Hetsika nokarakarain’ny fikambanana Valim-babena ary teo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tao Nosy-Be, tao amin’ny kianja ...Tohiny